Tababare Solskjær oo ka jawaab celiyay dhaleeceenta uu Mourinho u soo jeediyay Man United – Gool FM
(Manchester) 23 Sebt 2019.Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa qiray inay tahay mid sax ah dhaleeceenta uu Jose Mourinho u soo jeediyay Red Devils maalmo ka hor.
Dhinaca kale macalinka reer Norwegian ee Ole Gunnar Solskjær ayaa tilmaamay in qaab ciyaareedka uusan wali u soo hagaagin sidii uu rajeynayay.
Mourinho ayaa xaqiijiyay inuu u qalmay in laga ceyriyo Manchester United, sababa la xiriira natiijo xumi iyo qaab ciyaareedka kooxda oo aan fiicneyn.
Laakiin isla mar ahaantaas wuxuu tilmaamay in kooxda ay wali xun tahay, kaddib la shaqeynta tababare Ole Gunnar Solskjær, xilli ciyaareedkii hore iyo kan haatan socda.
Jawaab celinta tababare Ole Gunnar Solskjær ee hadaladii Jose Mourinho ayaa wuxuu imaanayaa kaddib guuldaradii 2-0 aheyd ee shalay ka soo gaartay kooxda West Ham United wuxuuna yiri:
“Waxaan u maleynayaa inuu ku saxan yahay Jose Mourinho aragtidiisa, sidoo kale waxaan halkan guuldaro kala kulanay xilli ciyaareedkii hore, waxaan rajeyneynaa inaan si fiican u soo kabano marxaladda soo socota”.
“West Ham waxay kaga faa’ideysatay fursadahii ay heshay si ka duwan anaga, sababtoo ah si fiican uguma faa’ideysanin waqtiyadii aan qaab ciyaareedka fiican ku soo bandhignay inta ciyaarta ay socotay” ayuu hadalkiisa ku soo xiray tababare Solskjær.